November 2017 - Sawirrotv
Ganacsato Soomaaliyeed oo Xalay Lagu Dilay Dalka Koonfur Afrika (Sawirro)
Wararka inaga soo gaaraya dalka South Afrika ayaa sheegaya in xalay ganacsato Soomaaliyeed lagu dilay dalkaasi, kadib markii dabley hubaysan ay weerareen goobtooda ganacsi. Muwaadiniintan Soomaaliyeed ee la dilay ayaa waxa ay ku sugnaayeen dukaankooda ganacsi, waxaana dilkooda ka dambeeyay sida la sheegay dabley hubaysan oo Burcad South Afrikaan ah. Labada Wiil ee Soomaalida haa …
Madax farabadan oo afkrikaan u badan ayaa ka qeybgeli doona Munaasabada Caleemo saarka Madaxweyne Kenyatta waxaana ka mid ah Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Nirobi. Dhanka kale Magaalooyinka qaar ayaa waxaa ka socda banaanbaxyo ay dhigayaan taageerayasha Xisbiga NASA ee uu hoggaamiyo siyaasiga caanka ah ee Raila Odinga kaasi …
Dagaalyahano ka Tirsan Ururka Al Shabaab oo Xoog Looga Saaray Deegaanka Abiikarow (SAWIRRO)
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa dagaal xoogan daggalyahano ka tirsan Ururka Al Shabaab ugala wareegay gacan ku haynta Deegaanka Abiikarow, oo hoos-tagga Magaalada Marka ee Xarunta Gobolka Shabellaha Hoose. Ciidanka Xoogga Dalka oo gacan ka helayay Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika ee Amisom ayaa Khamiistii la wareegay gacan ku haynta Deegaanka Abiikarow, ka dib markii …